Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Ukuya eVasgas? Pakisha iimaski zakho
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ukuya eVasgas? Vala phezulu!
Uninzi lwelizwe leNevada counties libuyele phantsi kwemaski egunyazisiweyo ukuzama ukukhusela ngokuchasene namatyala amatsha e-COVID-19 kulo lonke elaseMelika. Kumazwe ali-16 aseburhulumenteni, ali-12 abuyile afuna ukunxiba iimaski.
Ukusa kwiSixeko saseSin? Uya kudinga ukunxiba imaski.
Ukucwangcisa ukuhlala ekhasino iiyure kumatshini wokufaka okanye kwitafile yecraps? Uzakufuna imaski ngalo lonke ixesha ulapho.
Ngaba ufuna ukuthatha inxaxheba kwiibetets ezingapheliyo? Ngokuqinisekileyo, qhubeka, kodwa kuya kufuneka unxibe imaski phakathi kokutya okwenyani.
Abakhenkethi baneemvakalelo ezixubeneyo malunga negunya lokuzifihla ukuba libuyele ngamandla. Ezinye azikhathazeki konke konke. Ngapha koko, abaninzi bazigqibele ngokwabo ukugcina iimaski zabo nakanjani na ngaphandle kokulumka. Kodwa kwabanye, abonwabanga kukuthobela lo mthetho. Ingakumbi abo batshayayo. Ukuba utsala imaski phantsi, thatha utsalo, ungenise kwaye uphefumle, ubeke imaski phezulu kubo kukuba ngaphezu kokucaphukisa.
Kwilizwe liphela, kujongeka ngathi uninzi lwamagosa karhulumente adiniwe, nabo, kwaye bakhetha ukuvumela abahlali bathathe isigqibo. Nxiba imaski, musa ukunxiba imaski, kuxhomekeke kubo. Thatha umzekelo eHawaii. Nokuba amanani abo amatyala amatsha aya ngaphaya kwento ababebuyile kuyo "I-COVID-19 heyday" yezibalo, iRhuluneli ithe ayenzi manyathelo okuyalela ukugqoka. Namhlanje, iikhrayitheriya zakhe zisekwe kuphela ekujonganeni nedatha yokugonywa kunye nokufezekisa ukhuseleko lomhlambi. Ngokucacileyo into eyenzekayo phakathi kwethu ngoku nangexesha- ukuba “emva koko” iyafika-ayisixhalabisi. Abasebenzi bezonyango banokuba nethambo lokukhetha kunye naye njengoko izibhedlele zabo zigcwalisa ngakumbi nangakumbi ngezigulana ze-COVID-19 yonke imihla.